Misangano Yakaita Sei Muungano dzeZvapupu zvaJehovha?
Pamisangano yechiKristu yepakutanga painyanya kuitwa zvinhu zvakadai sekuimba nziyo, kunyengetera uye kuverengwa nokukurukurwa kweMagwaro, pasina kana tutsika twaitevedzerwa. (1 VaKorinde 14:26) Unogona kutarisirawo zvinhu zvakadaro pamisangano yedu.
Mirayiridzo yacho inobva muBhaibheri uye inoshandisika. Pakupera kwevhiki, ungano imwe neimwe inoungana kuti inzwe hurukuro yeBhaibheri yemaminitsi 30 inotaura nezvekushanda kunoita Magwaro muupenyu hwedu uye munguva dzatiri kurarama. Tose tinokurudzirwa kufambirana nemukurukuri tichiverengawo mumaBhaibheri edu. Kana hurukuro yapera, panouya Chidzidzo che“Nharireyomurindi,” chinoitwa kweawa imwe chete, uye vari muungano vanobatanidzwa pakukurukurwa kwenyaya inobva muNharireyomurindi yokudzidza. Kukurukurirana uku kunotibatsira kushandisa mazano eBhaibheri muupenyu hwedu. Mashoko akafanana anodzidzwa muungano dzedu dzinopfuura 110 000 pasi pose.
Tinobatsirwa kuvandudza unyanzvi hwedu hwokudzidzisa. Pakati pevhiki tinounganawo kuti tive nemusangano une zvikamu zvitatu, unonzi Ushumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu, unenge uchibva pamirayiridzo inowanika muPurogiramu Yezvokuita Uye Zvichadzidzwa yemwedzi nemwedzi. Chikamu chekutanga chemusangano icho chinonzi, Pfuma Iri muShoko raMwari, chinotibatsira kuti tirovedzane nechikamu cheBhaibheri chinenge chakafanoverengwa neungano. Panozotevera chikamu chinonzi, Shanda Nesimba Muushumiri, icho chinosanganisira mienzaniso yezvatingaita pakukurukura Bhaibheri nevanhu. Anopa zano anenge achicherechedza kuti azotibatsira kuvandudza unyanzvi hwedu pakuverenga uye pakukurukura. (1 Timoti 4:13) Muchikamu chekupedzisira icho chinonzi Kurarama kwechiKristu, munokurukurwa kuti tingashandisa sei mazano ari muBhaibheri muupenyu hwedu zuva nezuva. Izvi zvinosanganisira kukurukura pachibvunzwa mibvunzo, vanhu vachipindura, izvo zvinoita kuti tiwedzere kunzwisisa Bhaibheri.
Paunopinda misangano yedu, hapana mubvunzo kuti uchafadzwa nemhando yedzidzo yeBhaibheri yaunowana.—Isaya 54:13.
Chii chaungatarisira kunzwa pamisangano yeZvapupu zvaJehovha?
Ndeipi misangano yedu inoitwa vhiki nevhiki yaungada kupinda nguva inotevera?
Ongorora mamwe emashoko achadzidzwa pamisangano mishomanana inotevera. Cherechedza kuti ndezvipi zvauchakwanisa kudzidza zvinogona kukubatsira muupenyu hwako hwezuva nezuva.